कमल थापा ज्यु लाई बिनम्र अनुरोध | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर १६ गते १२:१६
आदरणीय कमल थापा ज्यु लाई बिनम्र अनुरोध
हेटौंडामा राजावादीले कमल थापा मुर्दावाद भन्दा तपाईं लाई जति नरमाईलो लागिरहेको छ । त्यो भन्दा बढि हामीलाई तपाईंले लंगडो हिन्दु राष्ट्र जिन्दावाद भन्दा लाग्छ । किनकि बिना संरक्षक (नेपालको गौरब राजसंस्था) नेपाल कसरी सुरक्षित हुन्छ र ? ०६२÷६३ पछि ६०१ जनामा राजाको नाम लिने तपाईं एक्लो हुनुहुन्थ्यो तर तपाईं को उचाइ गौरव गर्न लायक थियो ।
देशभक्त र राजभक्त तपाईं एक्लै हुनुहुन्थ्यो । नागरिक बिधेयक देखि प्रसस्तै बिधेयकमा तपाईंले देशलाई बचाउन गुन लगाउनु भएको थियो तर जब प्रचण्डको सरकारमा तपाईंले बिश्वको उत्कृष्ट संबिधान २०७२ भन्दै उप–प्रधानमन्त्री भएर पाईला अगाडी बढाउनु भयो, प्रायः सबै राष्टभक्त र राजभक्तको मन कुँडियो ।
किन त्यसो गर्नुभयो ? बाह्रबुँदेका खेतालाले नेपाललाई उपनिवेश को संघारमा पुर्याउन नपाउन । कतिपय निर्णयमा औंला ठड्याउन त्यो कदम बाध्यतात्मक थियो होला तर त्यसपछि पनि निर्मल निवासले मेरो सांसद लुकायो कसरी कुन आधारमा भन्नुभयो ? गम्भिर गल्ति भए तपाई बाट, तर अब फेरि गल्ति नगर्नुस । चन्द्र सुर्य झण्डा समाउनुस । राजसंस्थालाई पुनःस्थापना मिलेर गरौं । जब राजसंस्था फर्किन्छ । आफ्नो झन्डा चुनाब चिन्ह आफै रोज्नुस । आफ्नो ठाउँ आफै रोज्नुस ।
जय मुलुक , जय राज मुकुट ।